Zimbabweans in USA to Stage Anti-Mugabe Protests
Wednesday, May 22, 2013 Local time: 12:14
Zimbabweans in the United States are preparing for demonstrations in New York against President Mugabe who is expected at the United Nations General Assembly that officially kicks off Tuesday.
The demonstrations, under the 21st Movement Free Zimbabwe Global Campaign, will be held at this weekend.
Organizers of the event told VOA Studio 7 they have dubbed the demos 'Operation Take Back Zimbabwe'.
Denford Moyo, the coordinator of the 21st Movement and who is also chairman of the United States branch of the Movement for Democratic Change formation of Prime Minister Morgan Tsvangirai said the demonstations will also be in the United Kingdom and South Africa.
“We will stage these demostrations this weeked because we want more people to attend,” said Moyo.
Interview With Denford Moyo